Tselatra · Oktobra, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Oktobra, 2014
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Oktobra, 2014
Voasambotra Sahady Marc Ravalomanana
Vao ora vitsy no nahatongavany teto Madagasikara, dia re izao fa efa voasambotry ny fitondrana amperinasa sahady ity filoha teo aloha ity. Tampilaminana no nidirany, na dia miendrika fihantsiana ihany aza. Nefa izao fisamborana izao, fisamborana mba hahafahana manohy dinika ve , sa fisamborana vao mainka hamaly ny fihantsiana natao...
Raharaha Ravalomanana: Fampitàna Avy Amin'ny Prezidansa (teny Frantsay)
Eto ny fanazavana avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika mikasika ny raharaha Ravalomanana. Amin'ny teny Frantsay izy ity, saingy mbola hatolotra eto ny amin'ny teny Malagasy rehefa avoakan-dry zareo ho an'ny sarambabem-bahoaka “tsy avara-pianarana, tsy mahay mamaky/mahatakatra afa-tsy teny Malagasy”
Tonga eto Madagasikara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana
Tonga alina (12/10/2014) teto Madagasikara Atoa Marc Ravalomanana. Amin'izao ora anoratana izao (13/10/2014 9:54) dia eo ampiomanana handray sy hiresaka amin'ireo mpanao gazety marobe tonga eny amin'ny fonenany eny Faravohitra izy sy ireo mpomba azy. Maro koa ireo olon-tsotra mpanara-dia no tonga eny an-toerana. Maro ireo karazan'olona tonga manatona eny...